အနမ်းတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ပီတိကိုပြောပြကြ။
အင်အားသေးသေးကလေး လှုပ်ရုံနဲ့ ထိုမျှတုန်ယင်ကြ။
သူမက နားကို ညှို့တုန်းမှာ
Posted by ကိုနိုင် at 12:55 AM0comments
လျှောက်လိုက် ရတဲ့ခြေ ထောက်
ရင် ထဲ တဒိတ်ဒိတ်
Posted by ကိုနိုင် at 12:52 AM0comments
၁၀- မိနစ်မှ- ၃၀-မိနစ်လောက် အပြုံးပန်း ဆင်းမြန်ပြီး နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ပါ။
ဒါဟာ စိတ်ဓာတ်ကျသူ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်မျိုးပဲ။
2) နေ့တိုင်း ငြိမ်ငြိမ်သက်က် ၁၀-မိနစ်လောက် တရားထိုင်ပါ။
3) နံက်ခင်း အိပ်ရာထတိုင်း စိတ်ထဲမှ မြတ်စွာဘုရားကို သတိရကာ ဒီနေ့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်အတွက် ကောင်းသော လမ်းညွှန်မှုတွေ ရယူပါ။
4) စိမ်းလန်း ရှင်းလန်းနေတဲ့ သစ်သီး၊သစ်ရွက်များများ စားပေးပါ၊ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးခင်းမှ သစ်သီးသစ်ရွက်ကို နည်းနိုင်သမျှ နည်းနည်း စားပါ။
5) လက်ဖန်ရည် ( green tea ) နှင့် ရေများများသောက်ပေးပါ။
6) ပန်းမုန်လာနှင့် မက်မန်းသီများကို စားပေးပါ။
7) အနည်းဆုံး တစ်နေ့ကို လူသုံးယောက်နဲ့ အတူတကွ ပြုံးရွှင်စွာ စကားပြောပါ။
8) အသင်းအဖျင်းပြောခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်များကို မကုန်ပါစေနဲ့၊ အရင်က ဆန့်ကျင်ဘတ် အတွေးအခေါ်တွေ၊ အတိတ်က ကိုယ့်စိတ်ကို ထိမ်းမရအောင်ဖြစ်တဲ့ အရားများနဲ့ အချိန်ကို မကုန်လွန်စေပါနဲ့။သင့် စွမ်းအင်များကို ဆန့်ကျင်ဘတ်အတွေးအခေါ်များအစား… စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အတွေးအခေါ်မှာ မြုပ်နှံပါ။
9) နံက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကို မင်းသားလိုစား၊ ညနေစာကို အဖိုးအခပေးပြီး စားတဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်လို ရောစားပါ။
10) လူ့ဘဝကတော့ မညီမျှတာ အမှန်ပဲ..။ဒါပေမယ့် ကောင်းပါသေးတယ်။
11) သူတစ်ပါးကို မုန်းတီးဖို့အတွက် အချိန်မရှိဘူး၊ အရားအားလုံး မေ့ထားလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
12) ဘာကိုမှ မိမိကော သူတစ်ပါးကိုပါ အလွန်အကျွန်မဖြစ်စေနဲ့၊
13) မင်းဟာ ငြင်းခုံခြင်းမှာ အမြဲတမ်း အနိုင်မရနိုင်ဘူး ၊တစ်ယေက်နှင့် တစ်ယောက် အမြင်မတူ သဘောထားကာတော့ ကွဲပြားနိုင်တာပဲ။
14) အတိတ်က ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေပါ၊ ဒါဆိုရင် ပစ္စုပ္ပန်ကိုလည်း ထိမ်းသိမ်းရာရောက်တယ်။
15) မင်းရဲ့ ဘဝကို သူများနဲ့ မနိုင်းယှဉ်နဲ့၊ သူတို့ဒီလိုဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မင်းကောင်းကောင်းမသိဘူး။
16) မင်းမှတပါး ဘယ်သူမှ မင်းကို ပျော်ရွှင်အောင် မဖန်တီးနိုင်ဘူး။
17) ကမ္ဘာကြီးဟာ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတယ်။ ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ဘာဖြစ်မယ်လို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ဘူး။
18) လိုအပ်သူကို ရက်ရက်ရောရော ကူညီပါ။ ပေးကမ်းသူဖြစ်ပါစေ၊ ယူတတ်သူ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
19) သူများတွေ မင်းကို ဘယ်လိုထင်ထင် ဒါဟာမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။
20) အချိန်က အရာရာကို ကုစားသွားပါလိမ့်မယ်။
21) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အခြေအနေအရ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
22) မင်းအလုပ်က မင်း နေမကောင်းဘူးဆိုရင် စောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကတော့ မင်းကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ အဆွက်အသွယ် မပြတ်စေနဲ့။
23) မနာလိုဖြစ်နေခြင်းဟာ အချိန်ကို ဖြုန်းတာပဲ။ မင်းလိုအပ်တာ မင်းမှာအားလုံရှိနေပြီ။
24) ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးပါ။ တစ်နေတာအတွက် အောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးစီဆောင်းရွက်ခဲ့တာကို အားရကျေနပ်စွာခံယူပါ။ ကျေးဇူတင်ထိုက်သူအား ကျေးဇူးစကား ဆိုလိုက်ပါ။
25) မင်းရဲ့ ပူလောင်မှုတွေအတွက် ဒါအချက်တွေက မင်္ဂလာတွေဆိုတာ သတိရလိုက်ပါ။
26) ဒါတွေကိုလည်း မင်းသူငယ်ချင်းတွေကို သူတို့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စေဖို့ မျှဝေလိုက်ပါ။
Posted by ကိုနိုင် at 10:44 AM0comments
Labels: မှတ်သားစရာ အဆို အမိန့်များ
ပယ်ဖျောက်သင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး (၅) ခု
- လုံးဝဆာလောင်မွတ်သိပ်လာမှသာ အစာစားပါ
- ဗိုက်မပြည့်ခင် အစာစားတာရပ် လိုက်ပါ
- သရေစာမုန့်များအား သစ်သီး၊ ဟင်းရွက်၊ အခွံမာသီး၊ နှံစားပြောင်း စသည်တို့နှင့် အစားထိုးစားသုံးပါ။
(၂) ရုပ်မြင်သံကြားထိုင်ကြည့်ချိန် များပြားခြင်း
- ရုပ်မြင်သံကြားထိုင်ကြည့်ချိန်ကို တစ်နေ့ (၂) နာရီထက်မပိုပါစေနှင့်
- ရုပ်သံလိုင်းတစ်လိုင်းကိုသာ ပုံသေ ချိန်ထားပြီး မနှစ်သက်သည့် အစီ အစဉ်ပြလျှင် အခြားလိုင်းမပြောင်းဘဲ ပိတ်ပစ်ပါ
- ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်စဉ်မုန့်မစား ပါနှင့်
- ကြော်ငြာဝင်ချိန်တွင် အမှိုက်ပုံးသွန် ခြင်း၊ မီးပူတိုက်ခြင်းကဲ့သို့ အိမ်မှုကိစ္စ များလုပ်ကိုင်ပါ။
- နံနက်စာကို ကော်ဖီနှင့်မုန့်တစ်မျိုး တည်း စားရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကြာဆံပြုတ်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်၊ အသုတ်၊ စွပ်ပြုတ်စ သည် ခံတွင်းတွေ့ရာစားနိုင်ပါတယ်။
- အမျိုးသားများ၌ တစ်နေ့လျှင် အရက် နှစ်ဖန်ခွက်၊ အမျိုးသမီးများ၌ တစ်ဖန်ခွက်ထက်ပို၍ မသောက်မိပါ စေနှင့်။
- အရက်စွဲနေပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင် ပင်၍ အရက်ဖြတ်ပါ
- ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်၍ ဆေးလိပ် ဖြတ်ပါ
-အေးဆေးတည်ငြိမ်နေသည့် အချိန် တွင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။ အားလပ်ရက် များ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများနေသည့် အချိန် များ၌ ဆေးလိပ်မဖြတ်ပါနှင့်။
Posted by ကိုနိုင် at 6:42 PM0comments
တစ်ချိန်လုံး အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်နေသူ တစ်ယောက်မှ ဒါပေမဲ့ တချို့သူတွေဟာ တခြားသူတွေထက် ပိုမို ပျော်ရွှင်နေတတ်ကြတာဟာ မရှိကြပါဘူး။ အောက်ပါ အကြောင်းတွေကြောင့်ပါ။
Posted by ကိုနိုင် at 5:01 PM0comments
ညမအိပ်စက်မိ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များသုံးသူများ သတိထား .....……
ညမအိပ်စက်မိ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များသုံးသူများ သတိထား .....…… ညဘက်များတွင် လက်ကိုက်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက် ကွန်ပျူတာသုံးသူများ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည် ။ သင်သည် ညမအိပ်မီ လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့် တက်ဘလက်များသုံးလျှင် မျက်စိမှ ၁၂ လက်မခန့်အကွာအဝေးတွင် ထားရှိပြီး အသုံးပြု့ သင့်ကြောင်းကို သုတေသီများကလည်း အကြံပြု့ ထားပါသည် ။ ညဖက်တွင် အသုံးပြု့ နေသော အိုင်တီပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်မှ အလင်းတန်းများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ မျက်စိအမြင်အာရုံကို အယ်လ်အီးဒီမီးရောင်ရိုတ်ခတ်သဖြင့် လူကို အိပ်ပျော်စေသည့် မေလာနင်ဟိုမုန်းဓာတ်ကို ပျက်ပြယ်သွားစေပြီး အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားတက်ပါသည် ။ လူတစ်ယောက်သည့် အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်သွားခဲ့လျှင် မျက်စိကြောင်ခြင်းနှင့်အတူ အ်ိပ်စက်ခြင်းမရတော့ပါ ။ထိုကဲ့သို့ အိပ်စက်ခြင်းပျောက်လာသည့် ညအချိန်များစွာ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် လူ့ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည် ။ အိပ်ရေးပျက်လျှင် ရေရှည်တွင် အဝလွန်ရောဂါနှင့် ဆီးချို ၊ နှလုံး ၊ စိတ်ကျရောဂါများ အစ လူကြီးများတွင် လေဖြစ်ရောဂါအထိ ရရှိနိုင်ပါသည် ။ ဒါကြောင့် သင်သည်မဖြစ်မနေ အိုင်တီပစ္စည်များကို ညပိုင်း အိပ်စက်ခြင်း မပြု့ မိ အသုံးပြု့ လေ့ရှိလျှင် မျက်စိမှ ၁၂ လက်မခန့်အကွာအဝေးတွင် ထားရှိပြီး အသုံးပြု့ သင့်ကြောင့် တင်ပြရင်း အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေ ။
Posted by ကိုနိုင် at 4:59 PM0comments
အမြဲတန်း မောပန်းနေရခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းနည်းများလှုပ်ရှားတက်ကြွသော
အိပ်စက်ချိန် မလုံလောက်တာက သင့်ကို မောပန်းမှုဖြစ်စေပါတယ်။ အ သက်ကြီးသူအများစုဟာ အိပ်စက်ချိန် နည်းတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပေမယ့် အခု ခေတ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ အိုင်တီပစ္စည်း တွေကို ညဉ့်နက်သန်းခေါင်
အချိန်အထိ သုံးစွဲကြတာကြောင့် အိပ်စက်ချိန်ကို အ နှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ
ပါတယ်။ ညအချိန် မှာ နောက်ကျမှ အိပ်စက်ရပြီး မနက်ခင်းမှာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်
ရတာကြောင့် မဖြစ်မနေ စောစာထရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာသင့်မှာ
အဝလွန်ကဲခြင်းက နှလုံးကျန်းမာ ရေးပြဿနာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အဝ လွန်တာကြောင့် ညဘက်ကောင်းစွာ အိပ်မပျော်တာနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်များ
တာတွေ ဖြစ်စေကာ အရိုးအဆစ်တွေလည်း ထိ ခိုက်လွယ်တတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြစ်စဉ်တွေ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပြီး အိပ်စက်မှုအကျင့်တွေလည်း ပြောင်းလဲ သွားတတ်ပါတယ်။ ပထမသုံးလပတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မသိသာပေမယ့် ကိုယ်ဝန်လရင့်လေလေ အသက်ရှူ
ရခက် ခဲတာနဲ့ ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။ သားဦးကိုယ်ဝန်ဆောင်
သည်တွေ အနေနဲ့ မောပန်းမှုကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။
သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမယ့် နေထိုင်မှု ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါ စေ။ ပက်လက်မအိပ်ဘဲ ဘေးတစောင်း အိပ်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထောက်ပံ့
မှုပေး ထားကာ နွေးထွေးနေပါစေ။
ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နဲ့ ကဖင်း များစွာပါဝင်တဲ့ဖျော်ရည်တွေကို တစ်နေ့ ငါးခွက်ထက်ပိုသောက်တာကြောင့် သင့် ကို မောပန်းနွမ်းနယ်စေပါတယ်။ မနက် စာမစားတာကလည်း တစ်နေ့တာလုံးအတွက် သင့်ကို လန်းဆန်းမှု
ခေါင်းကိုက်နေချိန်မှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်သောက်တာ ဟာ သင့်ကို လန်းဆန်းနေစေတယ်ဆိုပေ မယ့် တစ်နေ့ကို ကဖင်းပါတဲ့ဖျော်ရည် သုံးခွက်ထက် ပိုမသောက်သင့်ပါဘူး။ မနက်ခင်းမှာ အာဟာရပြည့်ဝစေမယ့် အစားအစာကို ပုံမှန်စားပါ။
သင်စားတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အာဟာရညီညွတ်မှုမရှိတာကြောင့်နဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း သံဓာတ်နည်းတာကြောင့် သင့်ကို မောပန်းနွမ်းနယ်နေစေ
ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေအ နေနဲ့ ရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲနေနဲ့ မော ပန်းနွမ်းနယ်နေတတ်ပြီး ကြည်ကြည်လင် လင် မခံစားရဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တ ခြားဆေးဝါးတွေဖြစ်တဲ့ ပဋိဇီဝပိုးသတ် ဆေးနဲ့ တာရှည်စွဲသောက်ရတဲ့
ဆေးတွေ ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ပင်ပန်းမှုကို ခံစားကြရတတ်ပါတယ်။
ဆီချိုသွေးချိုရှိသူတွေနဲ့ ဆေးဝါး မှီဝဲနေရသူတွေအနေနဲ့ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်
ဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Posted by ကိုနိုင် at 8:55 PM0comments
ရေးခဲ့လေသမျှ ဖတ်ရှုရန် Jun 04 (2) Jun 05 (3) Jun 08 (1) Jun 09 (1) Jun 10 (1) Jun 11 (1) Jun 12 (4) Jun 14 (2) Jun 15 (6) Jun 30 (2) Jul 03 (1) Aug 15 (1) Sep 07 (2) Sep 19 (1) Sep 21 (1) Oct 07 (1) Oct 10 (1) Oct 14 (1) Oct 18 (1) Oct 20 (1) Oct 25 (1) Nov 10 (1) Dec 17 (1) May 27 (2) May 31 (1) Jun 18 (1) Apr 05 (1) May 27 (2) May 28 (2) May 29 (8) May 31 (4) Jun 01 (4) Jun 02 (3) Jun 03 (1) Jun 04 (3) Jun 05 (2) Jun 07 (2) Jun 10 (1) Jun 16 (1) Oct 18 (2)
တစောင်းလက်ပတ်၏ စွမ်းရည် တစောင်းလက်ပတ်သည် ချဉ်ဆီကို တိုးပွားစေသည်။ အဆိပ်ကို ပယ်၏။ အရေပြားအနာကို ပျောက်စေသည်။ ဆီးသက်စေ၏။ ကိုယ်အရေပြားရောဂါက...
http://www.khtnetpc.webs.com/ http://www.thespiritfruit.com/2011/11/software.h http://www.myanmarbi...
“ချစ်လားမချစ်လားသိဖို့အတွက်နည်း လမ်း ၁၂ သွယ်”
၁၂ : သင်ဟာ သူနဲ့ ညဘက်ထိစကားပြောမယ်။ အဲဒါတောင်မှ အိပ်ရာထဲရောက်ရင်လည်းသင်ဟာ သူအကြောင်းကို တွေးနေမိလိမ့်မယ်။ ၁၁ : သင် သူနဲ့တွဲပြီးလမ်းလျှော...
Stammering စကားထစ်ခြင်း Q: I am 33 yrs old man from Yangon. But now I am in (.....) foravisit. I am stammer. Please tell me how to cure my...
တနေ့ စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း အညာသားသူငယ်ချင်တယောက်နဲ့ ဟိုအကြောင်ဒီအကြောင် စကာတွေပြေားကြရင်း ကျွန်တော်ကစကာမစပ်ပေါ့ဗျာ... မင်းအကိုကောသူ့ ကောင်...
၁၀- မိနစ်မှ- ၃၀-မိနစ်လောက် အပြုံးပန်း ဆင်းမြန်ပြီး နေ့တိုင်းလမ်းလျှောက်ပါ။ ဒါဟာ စိတ်ဓာတ်ကျသူ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးတစ်မျိုးပဲ။ 2...
အရုဏ်အုံဆိုင်း၊ မနက်ခင်းနိမ့်ဆင်း တိမ်တွေနဲ့ လေးလံနေတဲ့နေ့ တရွေ့ရွေ့ဆက်သွား သည်လောက်ဂရုမထားတဲ့ အတို့အထိက သည်လောက်လွမ်းဆွတ...
မုတ်ဆိပ်မွေး ပါးသိုင်းမွေးရိတ်ဖို့ လူတစ်ယောက် ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ထဲ ဝင်လာပါတယ်။ သူ့အလှည့်ရောက်တော့ ဆံသဆရာက သူမုတ်ဆိပ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးတွေကို စ,...
EDGE စနစ်သုံး GSM Internet အသုံးပြုပုံ
EDGE စနစ်သုံးGSM Internet များစတင်လျှောက်ထားခွင့်ရရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့် GSMဖုန်း ဖြင့်Internet ချိတ်ဆက် အသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြ...
အဝတ်အစား ဝယ်ရာတွင် သိထားသင့်သော အချက်များ
ဈေးဝယ်တာက အမျိုးသား အများစု မကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ် ဖြစ်တာကြောင့် လွယ်ကူ မြန်ဆန်ပြီး အမှားအယွင်း မရှိဘဲ အဝတ်အစားတွေကို ဝယ်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်...